Tag: Ahịa Data Platform | Martech Zone
Tag: Ahịa Data Platform
RudderStack na-enyere ndị ọrụ injinia data aka inweta uru dị ukwuu karịa data ndị ahịa, yana Platform Data Ahịa (CDP) ezubere maka ndị mmepe. RudderStack na-anakọta data ụlọ ọrụ site na njirimara ndị ahịa ọ bụla - gụnyere web, mobile, na backend system - ma ziga ya n'oge gafere ebe nrụọrụ ojii 50 na nnukwu ụlọ nkwakọba ihe data ọ bụla. Site na ijikọ na nyochaa data ndị ahịa ha n'ụzọ nzuzo na ụzọ nchekwa, ụlọ ọrụ nwere ike ime ka ọ bụrụ omume azụmaahịa gafee
Ka ndị ahịa na-ekwukọrịta ma mepụta azụmahịa na azụmaahịa gị taa, ọ na-esiwanye ike ijide echiche nke onye ahịa na ezigbo oge. Enwere m nzukọ n'ụtụtụ a na onye ahịa anyị nke na-enwe nsogbu ndị a. Onye na-ere ahịa email ha dị iche na ikpo okwu ozi mkpanaka ha na mpụga nke ebe nchekwa data ha. Ndị ahịa nọ na-emekọrịta mana n'ihi na anaghị arụkọ ọrụ etiti etiti, a na-ebute ozi mgbe ụfọdụ na ma ọ bụ